Mbudzi 27, 2020
Mutungamiri weAmerica, VaDonald Trump
Mutungamiri weAmerica, VaDonald Trump, nemusi weChina vakati vanobva chete pamuzinda weWhite House kana vanosarudza mutungamiri wenyika vanozivikanwa seElectoral College, vakasarudza VaJoe Biden senhu akakunda musarudzo dzakaitwa musi wa 03 Mbudzi gore rino.
Aka ndekekutanga kuti VaTrump vaswedere pedyo nekubvuma kuti vakakundwa naVaBiden musarudzo idzi, kunyange hazvo vari kuramba vachidzikorora mashoko avo ekuti sarudzo dzakabirwa zvine mutsindo kunyange vasiri kuburitsa humbowo hwacho.
Vachitaura kuvatori venhau pazororo reThanksgiving vari pamuzinda wavo weWhite House, VaTrump vakati kana VaBiden, vebato reDemocratic Party, avo vanofanirwa kutoreswa mhiko musi wa 20 Ndira gore rinouya, vakanzi neElectoral College ndivo vakakunda musarudzo, vanobuda mumuzinda weWhite House.
Asi VaTrump vakati zvinenge zvakaoma kuti vatambire kuti vakundwa vachitarisa mamiriro akaita zvinhu pari zvino uye vakaramba kubuda pachena kuti vachange vari pamabiko ekugadzwa kwaVaBiden here kana kuti kwete.
VaTrump vakadzokorora zvakare kuti sarudzo idzi dzakabirwa panguva iyo vari kuenderera mberi nekusaburitsa humbowo hwekuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka.
VaTrump vakambenge vataurawo kuburikidza nevhidhiyo nenhengo dzemauto eAmerica vachidzipa mashoko ezororo reThanksgiving.
VaBiden vakakunda nezvigaro mazana matatu nezvitanhatu, kana kuti 306, zvakawanda kudarika mazana maviri nemakumi manomwe, kana kuti 270, zvinodiwa kuti munhu anzi ndiye akunda musarudzo, zvichienzaniswa nezvakawanikwa naVaTrump zvinosvika mazana maviri nemakumi matatu nezviviri, kana kuti 232.
VaBiden vari kutungamirawo VaTrump nemavhoti anodarika mamiriyoni matanhatu pakuve munhu akafarirwa nevanhu vakawanda kana kuti popular votes.
VaTrump nevabatsiri vavo vari kuzama nepose pavanogona kuti zvakabuda musarudzo mumatunhu akakosha zvishandurwe vachishandisa matare edimhosva kana kuedza kumanikidza vatungamiri vematunhu kuti vapindire, asi izvi zviri kuramba, izvo zvavasiya vasisina pekubatirira.
MuAmerica, munhu anoita mutungamiri wenyika ndokunge chete awana mavhoti akawandisa kubva kuvanodomwa nematunhu ava, kana kuti Electoral College, kwete nekuti awana mavhoti akawandisa musarudzo inovhotwa everuzhinji.
Vanovhota ava, kana kuti maElectors, vanodomwa nematunhu ose emuAmerica ari makumi mashanu pamwechete nedunhu reDistrict of Columbia, kana kuti D.C., kuti ave matunhu makumi mashanu nerimwe.
Vanodomwa zvichienderana nehuwandu hwevanhu mumatunhu aya, uye vanenge vari nhengo dzebato dzinenge dzazvipira kutsigira anenge akamirira bato musarudzo kana achinge akunda musarudzo inovhotwa neveruzhinji vemudunhu ravo.